Samee naftaada | October 2019
Ugu Weyn Ee Samee naftaada
Daaqadaha daaqa ee daaqa ee jiilaalku samee naftaada
Marka laga bilaabo bilawga cimilada qaboobaha, ilaalinta kulka qolka wuxuu bilaabmaa inuu ina dhibo. Maadaama biilasha biyaha ee korontadu ay korayaan oo kaliya, dad badan oo badan ayaa u jahawareeraya rinjiga kuleylka. Qiyaasta kuleylka weyn ee kulaylka ayaa ku dhacaya daaqadaha waxayna ku kala duwanaan kartaa 1/3 ilaa 1/2. Dhibaatadani ma ahan oo kaliya macaamiisha daaqadaha alwaax ee hore, laakiin sidoo kale kuwa caaga ah.
Noocyada habka dhajinta waraaqaha darbiga ah ee noocyada kala duwan: xalka dhibaatooyinka la xiriira
Wargeysyada - dusha sare ee loogu talagalay derbiyada iyo saqafka. Qiimaha yaryar, xulashada ballaaran ee midabada, qalajinta degdegga ah iyo ammaanka ayaa go'aamiya baahida sare ee iyaga. Su'aalaha kelida ah waa habka dhejinta. Sida loo sameeyo si sax ah - waxaan ka hadli doonaa arrintan. Diyaarinta derbiyada Waxa ugu horreeya ee la bilaabi karo waa diyaarinta derbiyada.
Sida loo qaabeeyo guryaha loogu talagalay Sannadka Cusub iyo Kirismaska ​​gacmahooda
Maalmo yar oo keliya ayaa weli ku haray Sannadka Cusub, taas oo micnaheedu yahay tiro badan, haddii ay wacan tahay, dadaal. Si aad u doorato geedka kirismaska ​​oo aad u qurxiso, iyada oo aanad illoobin ku saabsan gudaha guriga - shaqada waa mid culus: halkan sidoo kale waxaa jira xeerar iyo mabaadi'da. Waa wakhti aad ku ogaan kartid kuwa. Dhaqanka guriga qurxinta Qaababka ugu muhiimsan ee fasaxa ee qaabkoodii haatan ee noo yimid ayaa naga yimid Europe: kala hadlaya geedaha kirismaska, ubaxyada iyo garoonada.
Qurxinta Xafiiska Sannadka Cusub
Waxay u dhowdahay dabaaldegga Sanadka Cusub, inta badan dhammaan noocyada calaamadaha, garlands cad iyo qurxinta kala duwan ayaa laga heli karaa waddooyinka. Sawirkan kahor-jimcaha ah ma aha laakiin wuxuu dhiirigelinayaa qurxinta goobta shaqadooda. Waxaa intaa dheer, waa wax aad ufiican in la shaqeeyo halka aan jawiga rasmiga aheyn oo kaliya, laakiin waxaa jira sidoo kale yar, laakiin fasaxa noocan oo kale ah xusuusta xafladaha soo socda.
Waxaa jira ragga badan oo jecel inay wax walba ku qabtaan gacmahooda, iyaga oo aan soo jiidin kuwa sayidkooda. Wixii iyaga ah, wax dhibaato ahna ha ku lahayn pokleit wallpaper, oo jiifiso laminate. Maxay ku saabsan tahay albaabka trim? Waxaan u maleyneynaa in tani ay sidoo kale suurtogal u tahay iyaga, waxaana dooneynaa inaan la wadaagno iyaga talooyin qiimo leh, oo sheegaya sida loo saxo albaabka - birta ama qoryaha, oo sharax farsamooyinka iyo khasaarooyinka qalabka kala duwan ee daadinta.
Sameynta kursi ka sameysan suuqyada ayaa sameeya
Waxyaalaha qaarkood mararka qaarkood waxay la yaabaan asalkoodii. Waxay u egtahay in aad ka sameyn karto suuqyada la isticmaalay, kuwaas oo badanaa looma baahna xataa xitaa gadaalooyinka dukaamada. Waxay soo baxday in sariirtii la isticmaalay dib loo isticmaali karo oo faa'iido u leh guriga. Waxaad ka samayn kartaa qalab cajiib ah oo ka soo baxa alwaaxyadaas.
Sida loo cadeynayo saqafka
Taabashadu waa saldhigga ugu muhiimsan dhammaan shaqooyinka dhammeystiran, waana habka ugu fiican ee loo cusbooneysiin karo qolka. Si kastaba ha noqotee, nooca daaweynta maanta waxaa loo isticmaalaa si aan caadi ahayn. Markii aad go'aansatay inaad dib u cusboonaysiiso aqalkaaga, waxay ahayd xijaabka, waa muhiim in la ogaado sida loo sameeyo si habboon. Maanta waxaannu kuu sheegi doonnaa hababka furfurista ah iyo sida loo sameeyo dayactirkaaga si deg-deg ah oo karti leh.
Ku rakibida rakibidda saxda ah ee tuubbada
Marka ugu horeysa, waxay u muuqataa in rakibida tuubbada aysan aheyn mid adag: wuxuu ku daboolay wareegyada loo baahan yahay ee daloolka shaqada, ka gooyo, galiso tuubada, waxay ku xiran tahay bulaacadaha iyo tuubooyinka tuubada, oo dhanna - waad isticmaali kartaa. Dhab ahaantii, habka dhabta ah waa, marka laga reebo hal "laakiin."
Sidee si habboon u xoqin dhejinta on dhoobada iyo foornada
Fidinta deyrka - waa dhibaato, sidaas awgeed badanaa waa ku kalsoon tahay masters. Laakiin marka laga reebo laftirka laftiisa, waxaa sidoo kale jira dayax gacmeedyo u dhaxeeya jajabyada, taas oo sidoo kale u baahan in wax laga qabto. Marxaladdan waa suurtogal in la sameeyo adiga keligaa, taas oo aad hadda u arki karto adiga. Xulashada dufanka Daaweynta isku-xiga ayaa lagu dabaqay qaababka kala duwan, sida: On saldhiga sibidhka.
Sida loo dhigo xayawaanka daaqada caagga ah
Caadi ahaan, rakibidda xayiraadda daaqada, dhejisyada caagagga ah iyo foostada hooseeysa waxay dhacdaa isla marka daaqada lagu rakibo. Xaaladaha badankood, tan waxaa sameeya koox koox dhisme oo ku takhasusay dhismaha biraha. Laakiin waxaa jira kiis marka ay noqoto lagama maarmaan in la xiro daaqadda iyo gacmahaaga, iyo sida loo sameeyo si sax ah, waxaan ka fiirsan doonaa maqaalka.
Meelaha diiran ee kuleylka ah maanta ma aha mid raaxo leh, laakiin waa muhiim: xalkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xakamayso jawiga kuleylka ee guriga iyo si aad ah u keydiso koronto xilliga kuleylka. Faa'iidooyinka, iyo sidoo kale noocyada iyo xeerarka lagu rakibayo kuleylka dhulka hoostiisa ayaa si faahfaahsan uga hadli doona. Faa'iidooyinka dabaqa diiran Nidaamka diirimaadka diiran maahan mid cusub: 5 kun oo sanno ka hor, habka qaboobaha diiran waxaa loo isticmaalay bakhaarada Turkiga iyo Masar.
Sida loo dhigo foornada dabaqa iyo derbiga ee musqusha
Waqtiga dayactirka ee guri ama guri, ku dhajinta faylaha ee qubeyska waxaa loo tixgeliyaa inay tahay shaqo gaar ah, sidaas darteed dadka intooda badani waxay u muuqdaan inay hawshaan u dhiibaan xirfadlayaasha. Hase yeeshee, wax waliba maaha mid adag sida ay u muuqato marka ugu horeysa ee la eego, fayadhowrka ayaa loo samayn karaa shakhsi ahaan, iyo si loo sameeyo wax walba oo dhakhso ah oo waxtar leh, waxaan kuugu soo bandhignaa tilmaamo faahfaahsan iyo tixgelinta nuxurka weyn ee geeddi-socodkan.
Farshaxanno kala duwan oo ka sameysan koonaha ayaa sameeya
Malaha, ma jiro qof aan waligiis isku dayin in uu sameeyo farshaxan ama dahab la leh gacmihiisa. Laakiin qaar ka mid ah, tani waa uun xusuusta caruurnimada, halka qaar badani ayan ka tanaasulin shaqadan xataa xataa qaan-gaarnimada. Intaa waxaa dheer, dabeecada si joogto ah ayaa nagu soo dejiya dhammaan qalabka muhiimka ah. Iyo kuwa ugu caansan ee iyaga ka mid ah, dabcan, finan.
Sida loo sameeyo geed gaboobay
Haddii aad rabto inaad ku guuleysatid jilidaad iyo sharaf jimicsi ka samaysan waxyaabo alwaax ah oo ku yaal gudahaaga, waa inaad da'daada ku jirtaa. Iyo si aad si fudud guriga ugu sameyso, adigoo dooranaya habka ugu wanaagsan. Maqaalkani waxaan ka hadli doonaa hababka caanka ah ee gabowga iyo waxyaalaha farsamadoodaba. Waa maxay sababta ay u koraan qoryaha gaboobay Oddly waa ku filan yahay dhawaaqa, laakiin gudaha ayaa u muuqda geed aad u qurux badan, kaas oo ka soo horjeeda hore.
Sida loo sameeyo balli on goobta
Boorashka ku jira sawirkaaga ma aha oo keliya mid ka mid ah siyaabaha loo abuuro jawi raaxo leh, oo lagu nasto dalka, laakiin sidoo kale fursada ah in lagu daro dhadhan gaar ah oo loogu talagalay naqshada muuqaalka. Miyaad u malaynaysaa in qaabdhismeedka noocaas ah uu ka baxsan yahay awooddaada? Adigu waad khaldantay, waxaan kuu sheegi doonnaa sida loo hagaajiyo dejinta balli gacmahaaga, adoo isticmaalaya ugu yaraan lacag iyo dadaal.
Waxaan samaynaa qaabab loogu talagalay dhagxaan dhagaxyo laga soo qaato qalabka kala duwan
Dhuxulada asfaltka ah ee dushooda ku jira roobka iyo qiiqa aan fiicnayn kulaylkii hore. Waxaa lagu beddelay marin habaabin, nadiif ah, marin wanaagsan, oo ku daboolan noocyo kala duwan iyo midabyo kala duwan. Qalabka caatada ah ee cawska lagu rido ayaa ka dhigaya aragti ah murugo aan caadi ahayn ee geeddi-socodka oo dhan ee abuurista jidadka curyaaminta ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Samee naftaada 2019